Maqaallada Savannah Marie ee Martech Zone |
Maqaallada by Savannah Marie
"Runtii waxay ahayd meel aad u fiican oo lagu caweeyo illaa iyo inta qof walba uu ka tagayo halkaas." Tani waa cabasho caadi ah oo ka dhex jirta hipster. Suuqleyda ayaa la wadaagaya jahwareerkooda; taasi waa, haddii aad ereyga "qabow" ku beddesho erayga "faa'iido leh." Kanaalka suuqgeynta weyn ayaa waayi karaya dhalaalkiisa waqti kadib. Xayeysiistayaasha cusub fiiro gaar ah ayey u leeyihiin fariintaada. Kordhinta kharashyada ayaa ka dhigaya maalgashiga mid aan faa'iido badan lahayn. Isticmaalayaasha joogtada ahi way caajisaan waxayna u gudbaan daaqa cagaaran. Si aad u ilaaliso
Isniin, Disembar 30, 2013 Talaado, Janaayo 21, 2014 Savannah Marie
Bulshada iyo guud ahaan nolosha ayaa umuuqda inay xawaare fudud ku socdaan; soo qabashada ama seegi waa hal ku dhigga ganacsiyada badan. Xaqiiqdii, nolosha dariiqa degdegga ah waxay qaadatay macno cusub oo cusub iyadoo la hirgelinayo degello internet ah oo jira si loo wadaago nuxurka qaab-gaaban - Vine, Twitter iyo BuzzFeed waa lamaane kaliya, tusaalooyin caan ah. Sababtaas awgeed, noocyo badan ayaa u weeciyay diiradooda si ay u siiyaan macluumaadka ay macaamiishoodu ugu baahan yihiin guntimaha gaagaaban
Sanadihii la soo dhaafey oo dhan, sawir-qaadashadu meelwalba way joogeen sabab macquul ahna way lahaayeen. Tirakoobku badanaa waa lagama maarmaan in lagu daro kalsoonida, iyo shaxanka ayaa fududeynaya in la jajabiyo xogta laga yaabo inay culeys ku noqoto akhristaha celceliska ah. Adiga oo adeegsanaya sawir-gacmeedka, xogtu waxay noqoneysaa mid waxbarasho iyo xitaa xiiso leh in la akhriyo. Is-beddelka Infographic In 2013 In ku dhow inuu soo dhowaado, sawir-qaadista ayaa mar kale beddeleysa sida dadku aqoonta dheefshiidka u yeeshaan. Hadda, sawir-qaadista maahan